Base Station anteeno, Mobile anteeno, Laba Jidka Radio anteeno - ShengDa
Tayada waa Faraj, tayada waa daacad ah, oo tayo leh waa mas'uuliyad, oo tayo leh waa nolosha ee shirkada. Aan tayo leh, daacadnimada iyo suuqa, shirkadda lumiyo awoodda si ay u noolaadaan. SHENGDA Iyada oo wax soo saarka fasalka-koowaad, adeeg fiican, bixinta si degdeg ah oo qiimaha ugu fiican, waxaan ku heer sare ah ku guuleystay ammaani macaamiisha ajnabiga 'ah.
SHENGDA leeyahay talanti maamulka dhallinyarada oo cusub. Iyada oo xiriir waxgal ah iyo iskaashiga Siyaad Bare ka mid ah waaxaha kala duwan, tayada wax soo saarka sanadlaha ah ee shirkadda ayaa si weyn u soo hagaagtay. Tababarka oo talanti ayaa lagu qiimeeyaa, kaas oo bixiya dammaanad adag SHENGDA.
Iyada oo ka qayb ah indheer warshadaha, waxaan hagaajin kartaa tayada, yareeyo kharashka guud ahaan iyo soo gaabin si waqtiga la dhameeyo, ku dadaalaan si ay u gaaraan natiijooyin horumar joogto ah, oo waxaad ka samaysaa SHENGDA tartan xoog leh suuqa caalamiga ah. Macaamiisha lifaaq muhiimadda ugu weyn ee awoodda aan u leenahay in la horumariyo design cusub iyo awoodda wax soo saarka sare, halka heerarka tayada saxda ah iyo xawaaraha jawaabta.
Haddaba, waxaan isku dayaynaa in la abuuro suuqa cusub, la abuuro hab fudud, jaban oo aad u dheregto wax ganacsi ah. SHENGDA leedahay koox khibrad leh in la kulmi karo baahida wax soo saarka gaar ah wakhti kasta. Qiimaha aan abuuro ma aha kaliya in ay bixiyaan anteenooyinkooda, laakiin inay u beddesho anteenooyinkooda galay baahidaada dhabta ah.
915mhz anteeno, Wifi Antenna, GPS Marine anteeno , Yagi anteeno,